Hery - Tsiky dia ampy | Ankapobeny
Vinavina Coupe du monde Brésil 2014
2013-12-06 @ 18:33 in Ankapobeny
Vita io hariva io ny atsapaka tamin'ireo ekipa hiray vondrona sy hilalao amin'ny fifanintsanana any Bresil amin'ny 2014. Raha ny vinavinako, ka apetrako eto, dia ireto ekipa ireo no ho tafakatra eo amin'ny fahavalon-dalana izany hoe ho tafita amin'ny fifanintsanana.
Brésil, Mexique, Espagne, Hollande, Colombie, Cote d'Ivoire, Angleterre, Italie, Equateur, France, Argentine, Nigeria, Allemagne, Portugal, Belgique, Algerie.
Ny mahafinaritra aloha dia mety ho moramora ny hahatafakatra an'ireo ekipa afrikana telo ireo. Ny ekipa afrikana mety hampalahelo dia i Ghana izay tafiditra ao anatin'ny vondrona samy rezatra. Ho hita eo ihany anefa fa ny baolina boribory.
Natahotra ny HAT nosakanana i Ravalo
2011-02-19 @ 08:24 in Ankapobeny
Mahagaga ihany fa teo aloha dia nangataka ny hanagadr�na
an-dRavalomanana ny HAT... kanefa nony hody izy ity dia tsy navela
indray. Izany ve tsy manamafy hoe tsy misy dikany izany ny fitsarana
malagasy amin'izao fotoana izao? I Christine ao efa falifaly mihitsy
hoe hiampy iray indray ny client eny Tsiafahy kanefa toa matahotra
indray i Rajoelina sy i Camille ka vao roa andro mialoha dia efa
nalefa daholo na NOTAM na famporisihana ny olona hibahana ny aeroport.
I Ravalo nefa amin'io ho tonga tahaka ny mpandeha rehetra ary tsy nisy
mercenaires nanaraka akory araka izay novoizina tetsy sy teroa.
I Ravalo anie hono efa tsy mamim-bahoaka e. Koa maninona no sakanana
fa tsy avela ho menatra eo? Ary raha hoe hanakorontana indray no
hahatongavany, dia haharesy andry zalahy efa nanakorotana tamin'ny 26
janvier 2009 ireny ve izay olona karamainy hanakorontana? Sady izao
mbola niampy ny AV7 indray ka tokony tsy hahavanona mihtsy i Ravalo fa
Koa maninoa ary izany izy no nosakanana fa tsy notsenaina fotsiny
tamin'ny polisy teny Ivato dia samy nilamina :-) Hay matahotra ihany
ny HAT rehefa tena tonga tokoa ny tokoa.
Eto amin'ny sary dia Ravalomanana sy ny fianakaviany alohan'ny
hidirany ao amin'ny fiaramanidina.